INSTAGRAM ကိုမှစာသားကိုကော်ပီကူးဖို့ကိုဘယ်လို - INSTAGRAM ကို - 2019
သင်တစ်ဦး Instagram ကိုအသုံးပြုသူတွေဟာလျှင်, သင်လျှောက်လွှာစာသားကိုကူးယူနိုင်စွမ်းရှိသည်ပါဘူးသတိပြုမိကြပေမည်။ ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့သညျဤကန့်သတ်ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုပါ။
အစဉ်အဆက် Instagram ကို၏အစောဆုံးထွက်ရှိကတည်းကလျှောက်လွှာဓါတ်ပုံများများ၏ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်ဥပမာ, စာသားကူးယူမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအပင် Facebook ကန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူပြီးနောက်ဒီကန့်သတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
Method ကို 1: Google က Chrome အတွက်ရိုးရှင်းသော Allow Copy ကူး
မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ Instagram ကို website မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအရေးကြီးသောအပြောင်းအလဲသို့ကြွတော်မူ - ကို browser အတွက်စာသားကိုကူးယူနိုင်စွမ်းကန့်သတ်ခဲ့သည်။ စာသားခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့် clipboard ထံမှသူတို့ကိုထည့်သွင်းဖို့ကံကောင်းထောက်မစွာ, Google Chrome အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အတွက် add-on ၏အကူအညီဖြင့်, သင်သည် re-ဖွင့်နိုင်သည်ဖြစ်နိုင်ချေ။
အောက်က link ကို အသုံးပြု. Google Chrome ကိုသွားပြီးအပြင်ရိုးရှင်းသော Copy ကူး Allow ကို download လုပ်ပါ, အဲဒီနောက် browser ကို install လုပ်ပါ။
ရိုးရှင်းသော Allow Copy ကူး Download
ပွင့်လင်း site ကို Instagram ကို, ပြီးတော့သင်ကစာသားကူးယူလိုသည့်အတွက်ထုတ်ဝေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အိုင်ကွန်ရိုးရှင်းသော Copy ကူး (ကရောင်စုံရပါမည်) Allow ၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့စာသားကူးယူဖို့ကြိုးစား - နောက်တဖန်, သင်အလွယ်တကူ select လုပ်ပါနှင့်သင့်ကို clipboard မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
Method ကို 2: မင်္ဂလာကို right-Click Mozilla Firefox ကိုများအတွက်
သင်သည်ဤဘရောက်ဇာများအတွက် Mozilla Firefox ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်လည်းစာသားမကူးယူနိုင်စွမ်းပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်ခွင့်ပြုဖို့အထူးများအပြင်အကောင်အထည်ဖော်။
သင့် browser အတွက်, အောက်က link ကို, Add-ons တွေကိုမင်္ဂလာကို right-Click ၏ installation ဖြည့်စွက်။
မင်္ဂလာ right-နှိပ်ပါ Download
အဆိုပါ Instagram ကို website မှာသွားပြီးအလိုရှိသောထုတ်ဝေဖွင့်လှစ်။ သင့် browser ၏လိပ်စာဘားတန်း၌သငျနေတဲ့အနီရောင်စက်ဝိုင်းနှင့်အတူထွက်ကူးသေးငယ်တဲ့ icon ကိုမောက်စ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ site ပေါ်တွင်အလုပ်ဖြည့်စွတ် activate လုပ်ဖို့ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့ဖော်ပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ် comment ကိုကော်ပီကူးဖို့ကြိုးစား - ဤအခိုက်ကနေ, ဒီအခွင့်အလမ်းကိုတဖန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Method ကို 3: ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ browser မှာရေးသားသူ Dashboard ကို
သငျသညျ Third-party tools တွေကိုအသုံးမနိုင်လျှင်, မည်သည့် browser မှာ Instagram ကိုထံမှစာသားကိုကော်ပီကူးဖို့တော်တော်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ browser အားလုံးအတှကျသငျ့လျြောသော။
သငျသညျစာသားကိုကော်ပီကူးချင်ရာမှပွင့်လင်းအွန်လိုင်း Instagram ကိုပုံရိပ်။
စာနယ်ဇင်းများ F12။ တစ်ဦးကတခဏအကြာတွင်တစ်ဦးအပိုဆောင်း panel ကိုသငျသညျအောက်ပါပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အိုင်ကွန်ကိုရွေးပါဖို့လိုအပ်သည့်အတွက်မျက်နှာပြင်ပေါ်, ဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ် shortcut ကိုရိုက်ထည့် ကို Ctrl + Shift + C ကို.
ဖော်ပြချက်ကျော်ပျံဝဲ, ပြီးတော့လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
(စာသားကို Instagram ကိုအတွက်ပါလျှင်ထို့နောက် panel ကိုတော်တော်များများအစိတ်အပိုင်းများသို့ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်, အပိုဒ်သို့ကွဲပြား) ကိုရေးသားသူ Dashboard ကိုတွင်ဖော်ပြချက်ပြပေးလိမ့်မယ်။ ကရွေးဖို့မောက်စ်ခလုတ်ကို left စာသားအပိုင်းအစအပေါ်ကို Double-click နှိပ်ပြီး, အဲဒီနောက်ကီးဘုတ် shortcut ကို copy ပြီးရင် Ctrl + C ကို.
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမဆိုစာသားကိုအယ်ဒီတာ (Notepad ကိုပင်စံနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်), နှင့်ကို clipboard ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းခြင်း, ကီးဘုတ် shortcut ကိုတွင် ပြီးရင် Ctrl + V ကို။ အလားတူစစ်ဆင်ရေးစာသားအပေါငျးတို့သအပိုင်းအစများနှင့်အတူဖျော်ဖြေနေသည်။
Method ကို 4: စမတ်ဖုန်း
ပထမဦးစွာ Instagram ကို app ကိုစတင်ရန်နှင့်ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုကူးယူပါလိမ့်မည်သည့်ပွင့်လင်းလိုချင်သောထုတ်ဝေပြီးနောက်။
အဆိုပါ sub-menu ကိုဖွင့်ဖို့သုံးစက်နှင့်အတူအိုင်ကွန်၏အထက်ပိုင်ခွင့်ဧရိယာ၌ Tapnite သည်ကို select လုပ်ပါ "Share".
tapnite ခလုတ်ကိုဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌ "Copy ကူး Link ကို"။ အခုတော့က clipboard ထံ၌တည်ရှိ၏။
မည်သည့်စမတ်ဖုန်းဘရောက်ဇာပေါ်တွင်စတင်ပါ။ လိပ်စာဘားကိုသက်ဝင်နှင့်ယခင်ကကူးယူ link ကိုထည့်သွင်း။ button ကို Select လုပ်ပါ "ဤနေရာသို့သွားရန်".
သင်တို့ဆီသို့စိတ်ဝင်စားမှုများထုတ်ဝေဖွင့်ဖို့ screen ကိုလိုက်နာပါ။ Long ကသင့်ရဲ့လက်ချောင်းကသူ၏လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အမှတ်အသားတစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်သည့်ပြီးနောက်စာသား, အပေါ်ကိုင်ထားသူတို့ကအစအဦးမှာစိတ်ဝင်စားမှု၏အပိုင်းအစရဲ့အဆုံးမှာနေရာချင်တယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခလုတ်ကိုကို select "Copy ကူး".
Method ကို 5: ကြေးနန်း
အဆိုပါနည်းလမ်းကိုသင်စာမျက်နှာ၏ဖော်ပြချက်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထုတ်ဝေရနျလိုအပျကွောငျးဖြစ်ရပ်အတွက်သင့်လျော်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်သော bot တွေဟာ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ Service ကိုကြေးနန်း။ အောက်ပါဆွေးနွေးမှုဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ဖော်ပြချက်များရာထူးမှဖယ်ရှားခံရဖို့တတ်နိုင်သောလှေပေါ်တွင်အာရုံစိုက်။
ကြေးနန်း iPhone အတွက် Download
Start ကိုကြေးနန်း။ tab ကို "ဆက်သွယ်ရန်"ကော်လံ "အဆက်အသွယ်များနှင့်လူများအတွက်ရှာရန်",, ရှာရန်အောက်ခြေ "@Instasavegrambot"။ ယင်းကိုရှာဖွေရလဒ်ကိုဖွင့်။
နှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက် "Start"သင်တို့သည်အသုံးပြုမှုအတွက်သေးငယ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ပရိုဖိုင်း၏ဖော်ပြချက်အရနျလိုအပျပါက, bot သတင်းစကားတစ်ခု format ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ် "@ Login_polzovatelya"။ သငျသညျထုတ်ဝေရန်ဖော်ပြချက်အရချင်တယ်ဆိုရင်, အဲဒါကို link တစ်ခုထည့်သွင်း။
ဒီလိုလုပ်ဖို့က, Instagram ကို app ကို, ပြီးတော့နောက်ထပ်အလုပ်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်ထုတ်ဝေ, run ။ သုံးစက်နှင့်အတူအိုင်ကွန်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ Tapnite နှင့်ကို select "Share"။ အသစ်က window ထဲမှာသင် button ကိုနှိပ်သင့်တယ် "Copy ကူး Link ကို"။ သငျသညျထို့နောက်ကြေးနန်းမှပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
ကြေးနန်းထဲမှာပေးတဲ့ dialog လိုင်းမီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့် button ကို select လုပ်ပါ "ထည့်"။ အဆိုပါ bot တစ်ကောင်မှသတင်းစကားကိုပို့ပါ။
တုံ့ပြန်မှုများတွင်ချက်ချင်းနှစ်ခုမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိ: တဦးတည်းထုတ်ဝေနေတဲ့ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုမဆံ့, ဒုတိယမည် - ယခုအလွယ်တကူကူးယူနိုင်သည့်ကဖော်ပြချက်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, Instagram ကိုဒင်္ဂထဲကနေလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုကူးယူပါ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ။
ဗီဒီယို Watch: Vegedream - Instagram ft. Joé Dwet Filé (စက်တင်ဘာလ 2019).